ကျော်ပြောတာ ဟုတ်ပါပုလို့စ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ကျော်ပြောတာ ဟုတ်ပါပုလို့စ်	20
Posted by ဂျစ်စူ on Aug 2, 2016 in Aha! Jokes, Satire | 20 comments
ရေလည် အီးတင်းနေတာနဲ့ ဆိတ်ပြေလက်ပျောက်
ဒါပေမဲ့ အတော်မှန် သဟေ့
ပျင်းရင် မစံဂျာကနေ SimSimi ကို ရိုက်ရှာပြီးမေးကျိ
တောတွင်းပျော် says: ခုမှပဲ ဂဇက်ကလူတွေ
ကျား မ ကွဲတော့ တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1143
may july says: ဦးတောကို သိလား သိတာပေါ့
376 ဖစ်နေတာလေ ခ်ခ်
စမီးလဲ မြင်တာပြောကြည့်ဒါပါ ….
တောတွင်းပျော် says: အော့Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: ကိုတောကို သိလား
ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: ဘာများပြောသတုန်း ..
အဟမ်း .. အဟမ်း!
နာမည်ကြီး လျှံလျှံတောက်ဆိုတော့Was this answer helpful?LikeDislike 1143
may july says: ကန် တော့ နော် ကန် တော့ …
ခု 379 ဖြစ်တွားပီ လို့ …
Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: နောက်တစ်ခါမေးရင် နောက်ထပ် အမှတ်တွေတိုးအုံးမလား ..
376 မှ နားထောင်လို့ကောင်းသေး Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: ဥစ္စပေါ ရုပ်ချော
ကျော် အပေါ်မှ SS တင်ပေးထားတယ် ကျိကျိ
တောတွင်းပျော် says: ကတောက်စ်!
တောင် ၃ တောင်
တော ၃ တော
နာဒယ် .. နာဒယ် အသည်းနာဒယ် Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: အော် အသားမဲမဲ ရုပ်ကြမ်းကြီးကိုများ
စကားအရမ်းများတဲ့ ကောင်မလေး တဲ့…။
may july says: ဥူးလေး က chaw တာကို လိုစ့် ..။
kai says: ပြောင်မပြောင်… ပြန်တောင်ကြည့်မိသွားတယ်.။
ငါမပြောင်သေး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: ငါမပြောင်သေး တမွှေးကျန်သေး အဟေး အဟေး
မမချွိ says: ဟယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဟိဟိ
နာ့အရပ်နဲ့ အမောင်းက ဘယ်နပေပါလိမ့်
Foolish Girl says: တယ်ဟုတ်တာပဲ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားရိုက်ထည့်ရင်လည်းပြန်ဖြေနိုင်တယ် ဗျ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဟိ.. သူနဲ့ စကားပြောရတာ အတော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်… ရယ်နေရရော..
kotun winlatt says: တော်သေးတယ် . . . ကျုပ်နာမည် မပါတာ ဟေ ဟေး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဗိုက်ကလေးပေးဘို့ညီမရှာလိုက်အုံးမယ်